အဘို့မှာတော့ ATR လို့ရေးပြီး 42 / 72 ၏ installation P3D ဖျက်ပစ်ရန်တပ်ဖွဲ့များ FSX-Installation? 1 months ago6တစ်နှစ် #1351
အဘို့မှာတော့ ATR လို့ရေးပြီး 42 / 72 ၏ installation P3D ဖျက်ပစ်ရန်တပ်ဖွဲ့များ FSX-Installation? 1 months ago6တစ်နှစ် #1356
လေယာဉ်ဖိုင်ထဲရှိ atr ဖိုင်များကိုပေါင်းပြီးပြားနှင့်အသံနှင့်သက်ဆိုင်သောဖိုင်များကိုအဓိကလမ်းညွှန်မှကူးယူပါ။ သင် pc သို့မဟုတ်ပြင်ပ hard drive တစ်ခုသို့ကူးယူပါ။ ပရိုဂရမ်ကဖိုင်များကိုဖျက်ပြီး၎င်းကိုထည့်သွင်းပါစေ။ ဖိုင်များကိုပြန်ဖွင့်သည် fsx နှင့်သင့်ရေနွေးငွေ့တဦးတည်းကိုသင်ပြန်သို့တက်ကျောထောက်နောက်ခံဖိုင်များကူးယူပြီး paste မဟုတ်ပါလျှင် fsx နှင့်ရေနွေးငွေ့အပေါင်းတို့နှင့်အဖြစ်ပြန်လွယ်ကူသောအရပျ၌ဖြစ်လိမ့်မည်။ အထက်ဖော်ပြပါဖိုင်များအားလုံးသိမ်းဆည်းရန် atr ps ပိုင်ရှင်များကိုရွေးချယ်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်ဖိုင်များအားထပ်မံရေးရန်တောင်းသောအခါဂိမ်းကိုထိခိုက်နစ်နာစေမည်မဟုတ်ဟုဖြေဆိုရန်လွယ်ကူသည်။